I-River Run: Ifreyimu ye-A-frame efihlekile, amamayela angu-2 ukusuka e-G Marais - I-Airbnb
I-River Run: Ifreyimu ye-A-frame efihlekile, amamayela angu-2 ukusuka e-G Marais
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Colette And Justin
U-Colette And Justin Ungumbungazi ovelele
Le ndlu eyakhiwe ngamapulangwe eyakhiwe ngohlobo lwe-A inomuzwa wasentlango, amamayela amabili nje ukusuka e-Grand Marais. Sebenzisa ngokunenzuzo izindawo zokudlela ezidumile zase-Grand Marais, izitolo, nogu noma uphumule eduze komlilo wakho oseceleni komfula ngemva kosuku lokuhlola noma lokuphumula.
Hlola imifula, nemizila yale ndawo enama-acre angu-25 eyenziwe ngamapulangwe. Phumula noma ujabulele incwadi enhle engaphakathi eligcwele ilanga nevulekile, kusuka ku-hammock phakathi kwezihlahla ezimbili ze-birch, noma kudekhi enkulu yangaphambili ezungezwe yimvelo.
(Ngokuvamile sigcina ubuncane bobusuku obubili, kodwa ngezinye izikhathi sinesihlabathi sobusuku obubodwa phakathi kokuhlala okubili kwesikhathi eside. Simema ukuhlala kobusuku obubodwa ngalobo busuku futhi kuvuleke okumbalwa. Sicela uhlole ikhalenda ukuze uthole ukutholakala okubuyekeziwe.)
Umndeni wethu uyakuthanda ukuhambahamba emfuleni wasenyakatho futhi ubulokhu ucabanga ukuthi kungaba kuhle ukuba nendlu eyakhiwe ngamapulangwe kwenye yaleyo migfu emikhulu. Nakhu!
Izitshalo eziluhlaza ezizungeze indlu eyakhiwe ngamapulangwe ziguquka zibe imibala yasekwindla ejabulisayo ngo-September nango-October. Ukuncibilika kwentwasahlobo kuguqula ukuhlangana ngenye indlela, ukutshuza emfuleni wasekwindla kube yinkimbinkimbi enamandla ongayizwa ngaphakathi endlini eyakhiwe ngamapulangwe.
Ngisho noma indlu eyakhiwe ngamapulangwe itholakala amamayela ambalwa ukusuka ogwini lwaseLake Imper futhi amamayela angu-2.5 ukusuka e-Grand Marais, igcina amahlathi aseNyakatho ngempela, umuzwa wegridi: umgwaqo ojulile ojulile ukhuphukela egqumeni usuka e-Lake Imper, ukuwela phezu komzila omncane, lapho uzopaka khona ekhanda lomzila. Ukusuka lapho uzogibela amagceke angu-400 (cishe ukuhamba ngemizuzu engu-5) uhamba ngezinyawo ukuya kule ndlu eyakhiwe ngamapulangwe enhle emahlathini, eceleni kwe-bluff yoMfula wasekwindla. Sicela uthathe isikhashana ukubheka ibalazwe uma ufika endlini eyakhiwe ngamapulangwe. Alukho uthango noma izimpawu eziningi zokuphawula imigqa yendlu, ngakho-ke sicela uqaphele indawo okuyo futhi ucabangele izindlu ezakhiwe ngamapulangwe ezingomakhelwane nabanikazi bomhlaba lapho uhlola indawo.
Inqola iyatholakala uma uyifuna. Indlu eyakhiwe ngamapulangwe inekhishi elinamabhodwe namapani, izitsha zesiliva, izitsha zengilazi, isitofu se-propane, isipholisi esinezinto ezimbili, kanye namanzi angaphezu kuka-30 okuphuza, izitsha, nokuhlanza.
I-A-frame inendawo yaphansi ebheke eningizimu kuya emafasiteleni kasilingi abonisa amahlathi azungezile futhi ivumela ukukhanya nemfudumalo eminingi. Ngobusuku obumnandi bentwasahlobo nasekwindla kukhona i-heater encane ye-propane ongayikhipha.
Kukhona ikamelo lokulala elithokomele phansi elinombhede omkhulu futhi ukukhuphukela ezitebhisini kuyiloft egcwele ifasitela elinemibhede emithathu emibili. Yonke imibhede izonikezwa ngemicamelo nezinto zombhede.
Kukhona isistimu encane esebenza nge-solar esekela ukukhanya kwekamelo lokulala, ikhishi, ne-loft neshaja yefoni.
Indlu yangasese enomquba we-Sun-Mar ilungele indawo ezungezile, ilula, futhi ithokomele. Umpheme nama-hammock afakiwe anikeza ithuba lokuphumula nokubhaka izinkuni ezingama-acre angu-25 futhi ulalele ukugijima komfula.
Sinikeza i-shower yelanga elula (iklanywe i-kinda njengesifutho esikhulayo esine-shower), noma uma izivakashi zifuna umfutho owengeziwe wamanzi ungase ucabangele ukuvakashela i-Grand Marais rec park ukuze uthole i- $ 4 shower, noma uthenge i- $ 10 usuku-ukuya e-Grand Marais YMCA ukuze usebenzise ngokunenzuzo indawo yokuzivocavoca, indawo yokuzivocavoca, amashawa, ubhavu wamanzi ashisayo, i-sauna, ne-pool.
Isakhiwo esisanda kwakhiwa se-A-frame (2020) sinethezekile ngamafasitela amaningi nophahla oluwuvulande olunikeza ukukhanya kwemvelo okuningi kanye nama-breezes.
Izingane nabantu abadala ngokufanayo bazojabulela ukuhamba ebhange noma emanzini ahambayo eMfuleni Omkhulu Wasekwindla, noma izinqola zemidlalo, futhi zisesha idwala emzileni omncane. Ukusuka endlini eyakhiwe ngamapulangwe, lindela ukubona izimuncumuncu, ama-squirrels, nezinyoni ezisukela ezinyoni zezingoma kuya kumahlathi, ama-grouse, ama-ravens, nama-bald eagles. Amahlathi nawo ayikhaya lezivakashi ezingavamile njengebhere elimnyama ne-moose. Ama-Coyote namapulangwe angazwakala eduzane. Futhi hlala uqaphe amakhowe (angenakudliwa) kanye nama- raspberries asendle.
Konke lokhu, ukugibela ibhayisikili okufushane, ukugijima, noma ukushayela usuka ogwini lwaseLake eGrand Marais!
4.88 · 100 okushiwo abanye
Eduze ne-Lake Imper ne-Grand Marais, izungezwe ngama-acres angu-25 wamahlathi axubile, umfula wekwindla, nomfula wezinsana.
Ibungazwe ngu-Colette And Justin
Sihlala cishe amamayela ayisikhombisa ukusuka endlini eyakhiwe ngamapulangwe futhi sikushayela ucingo noma sikuthumele umyalezo ukuze sikusize nganoma yimiphi imibuzo phakathi nokuhlala kwakho.
UColette And Justin Ungumbungazi ovelele